Imisebenzi yezandla eneeCD: ezona ngcebiso kunye nemibono | Ukuhlaziywa okuluhlaza
ICompact Disc okanye iCD yinto ebesiyisebenzisa kwisithuba seminyaka elishumi ka-2000 nango-2010, kodwa ukusetyenziswa kwesidumbu sayo kuncitshiswa ngakumbi. Itekhnoloji ethe xhaxhe ngesantya esiphezulu kwaye ngale nkqubela phambili, ngokuqinisekileyo uya kuzifumana usekhaya uneeCD ezininzi ezingenamsebenzi. Inokwenziwa ngokuqinisekileyo imisebenzi yezandla eneCD ziphinde zenziwa kwakhona ukuze zinikwe ubomi obusebenzayo besibini kwaye zingavelisi inkunkuma eninzi. Ngokuqinisekileyo uninzi lwazo lutsala umnxeba ukuba lusetyenzisiwe kwaye awunandawo yokubavelisa kwakhona.
Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku ukuba likuxelele ezinye zezona zinto zenziwe ngobugcisa kunye neeCD ukuba ziphinde zisetyenziswe.
1 Imisebenzi yezandla eneeCD
1.2 Umleqi maphupha
1.4 IPlanethi yeSaturn
Imisebenzi yezandla eneeCD
Imalunga nokwenza i-hovercraft ukuze abantwana bakho bazonwabise kwaye bonwabe xa bedlala nabo. Inokumiliselwa ukuze ibone ukuba ngubani oya kude kakhulu okanye uyonwabele nje. Masibone ukuba zeziphi ezona zinto ziphambili ekufuneka uzenzile ukuze uzenze:
Iphepha elimhlophe okanye ikhadi lekhadikhadi
Intonga yeglue kunye neglu yangoko
Okulandelayo, sibonisa amanyathelo afanelekileyo ekufuneka uwenze ukwenza le misebenzi yobugcisa ineeCD:
I-Primero, Sebenzisa iCD yakho ukuzoba ulwandlalo lwabo kwikhadibhodi ethambileyo uzisike.
Sebenzisa iziphawuli ezinemibala ukuhombisa ikhadibhodi ngendlela othanda ngayo.
Xa sele ukulungele, uncamathisele ikhadi kwiCD. Kubalulekile ukuba ungalibali ukugrumba kwakhona isangqa sendawo ukuze umngxuma uhlale.
Sebenzisa iglu yangoko, ncamathelisa isiciko seplastiki kumbindi weCD, kanye apho umngxunya ukhona.
Inflate kwaye ubophe ibhaluni. Emva koko qhawula ukuvula kwisokethi kwaye ulungile ukuba uhambe.
Ababambisi bephupha banokusebenza njengekhubalo lokukhusela abantwana kumaphupha amabi. Nangona bengenasiphumo sokwenyani, ezincinci zinokwenziwa zikholelwe ukuba ziluncedo ukuze bazive bezolile kwaye banokulala kakuhle. Ukwenza obu bugcisa ufuna ezi zinto zilandelayo:
Iziphawuli ezinemibala esisigxina
Ukwenza i-dreamcatcher kufuneka uhambe inyathelo ngenyathelo ukuba ufuna ukuyenza ngokuchanekileyo. La ngamanyathelo aphambili ekufuneka elandelwe:
Isinyathelo sokuqala ukusika isiqwenga somsonto (malunga ne-15 cm) kunye ne-glue ekupheleni komva kwi-CD.
Emva koko, Kuya kufuneka uhambe ngomngxunya ongumbindi kwelinye icala lediski inani elingaqhelekanga lamaxesha. Ukuba kulula kuwe, unokuzinceda ngeenaliti zeplastiki.
Xa sele ilungile, hambisa yonke imisonto eyenza i-shaft ngaphezulu okanye kancinci ngokulinganayo. Ngoku, ungalikhulula icandelo lomsonto owawufakelwe phezulu kwaye ulibophe kwisiphelo esishiyekileyo.
Ixesha lokuluka uboya. Unokukhetha imibala emininzi kwaye uyixube ngokuthe ngcembe. Lungisa umsonto kumbala owukhethileyo ukuqala inaliti, ubophe isiphelo ngasemva kwe-cd kwishafti kwaye uqale ukunitha. Uluvo kukuba inaliti idlula nge-axis enye ngezantsi kunye nangaphezulu ngasentla kude kuphele umsonto.
Phinda usebenze ngokufanayo kuyo yonke imibala ekhethiweyo.
Emva koko, khetha umbala womsonto wokuphela kwamaso aya kuthwala kwaye axhomeke kwiCD. Bopha umtya ngamnye emva kwawo. Kwelinye icala, faka amaso uze ubophe iqhina elingqindilili ukuthintela ukuwa.
Ngaphezulu, uxhoma intambo ephindiweyo, Kuya kufuneka ugqithe komnye wemigodi, emva koko ubophe isiphelo sayo.
Njengokuchukumisa okokugqibela, unokuhombisa umphezulu weCD ngeempawu ezimakishayo ezinemibala.
Ukujikeleza okuphezulu okurisayikilyo ayisiyinto yokudlala yabantwana kuphela ukuba bazonwabise, kodwa ikwazisa ukwazisa ngembali malunga nolutsha lwabazali. Kwaye yile nto kuphela kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo umphezulu wokujikeleza yayiyeyona midlalo idumileyo neyaziwayo kubantu abancinci. Lo nto ungaphoswa ziindlela ezindala esinokuzenza ngazo ezi crafti ngeCD kwaye sonwabe kunye nazo. Ukuze wenze eziqongweni uya kufuna ezi zinto zilandelayo:
Iphepha lesitikha elimhlophe
Ukuqhuba umphezulu wokujikeleza, siza kubona ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Kwiphepha elimhlophe lokuzimela (ukuba awunayo, ungasebenzisa ikhadi elimhlophe ukulixhoma kwi-CD), zoba umgca weCD, kubandakanya nomngxuma ongumbindi, usike uze uncamathele kwiCD.
Yihombise iCD ngemakishayo enemibala kunye neepateni ozifunayo.
Emazantsi e-CD, embindini womngxunya, kuya kufuneka uncamathisele imarble ngeglue ekhawulezileyo.
Kwiziko, kodwa ngaphezulu, Uya kuphinda umsebenzi ofanayo wokuncamathelisa isiciko seplastiki.
Xa iglu yomile kwaye ujonga ukuba yonke into ikwimeko ekhuselekileyo, lixesha lokuba uqalise umphezulu wokujikeleza kwaye uqale ujikeleze.
Enye indlela yokwenza abantwana bonwabe ngelixa befunda kukwenza iplanethi iSaturn kwiCD endala. Ayinakuba kuphela bubugcisa bokuphinda busebenze, kodwa kananjalo inceda ukuyila kwabantwana kunye nokuhombisa kwegumbi labo. Ngale planethi yenziwe ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe unokuba nomhombiso owenzelwe wena kunye neenjongo ezintle ngokubhekisele kwindalo. Ukwenza lo msebenzi wobugcisa udinga ezi zinto zilandelayo:
Ipeyinti kunye nebrashi
Okulandelayo, sikubonisa ukuba ngawaphi amanyathelo aphambili ekufuneka uwalandele ukuze wenze iplanethi ebuyiselweyo eyiSaturn:
Yahlula-hlula ibhola ye-polyexpan kwisiqingatha sesibini uze upeyinte isiqingatha ngasinye ngetempera yeorenji.
Emva kokuba ipeyinti yome, Bopha umtya kwenye yeepatch ukuze uyixhome kamva.
Okokugqibela, ncamathelisa isiqingatha ngasinye sembumbulu yeplastiki egalelwe i-CD (enye ingaphezulu enye isezantsi njenge "sangweji").
Ngezi ngcebiso ungonwabela kunye nabantwana bakho ubugcisa obulula ngelixa uya kufumana izinto ezindala. Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neminye imisebenzi yobugcisa eneeCD.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Ubugcisa beCD